Tafatafa tamin’i Laurent Rajaonarivelo – Politika
Home Tafatafa Tafatafa tamin’i Laurent Rajaonarivelo
28 août 20197 mai 2020By Raoto Andriamanambe
Tale jeneraly an’ny Birao malagasy misahana ny solika (OMH)
« Fifampiraharahana hametrahana vidin-tsolika mirary eo amin’ny fiaraha-monina »
Mba azonao ambara fohifohy aminay ve ny amin’ny fitantanana ny vidin-tsolika?
Araka ny lalàna 2004-003 dia nohalalahana ny sehatry ny solitany malagasy tamin’ny fiantombohan’ny taona 2000. Vokatry ny fisondrotan’ny vidin-tsolika tsy an-kijanona teo amin’ny tsena anatiny anefa dia nanomboka niditra an-tsehatra teo amin’ny fitantanana ny fanjakana tamin’ny taona 2011. Izany dia notanterahana tamin’ny taona 2013 tamin’ny alalan’ny famoahana fehezan-dalàna mifehy ny vidin-tsolika eny amin’ny mpaninjara. Ny vidiny ho an’ny mpanjifa vaventy, toy ny Jirama, ny Air Madagascar, Ambatovy sns., dia fehezin’ny fifanarahana manokana sy malalaka eo amin’ny mpandraharaha ara-tsolitany sy ny mpanjifa ao amin’izy ireny.
Tahaka ny ahoana sy ahoana ny firafitry ny vidin’ny solika?
Aorian’ny fifampiraharahana ifanaovan’ny mpandraharaha sy ny fanjakana no ampiharina ny rafi-bidy. Ny rafi-bidy dia kajiana avy amin’ny atao hoe ‘vidiny voakajy iaingana’ (prix de références calculés, PRC) izay taratry ny tena vidiny marina. Raha refesina miohatra amin’ny politikam-panamarinam-bidy isam-bolana dia mifandanja ny elanelana misy eo amin’ny PRC sy ny ‘vidiny ambony indrindra ho an’ny mpanjifa’ (PMAP). Ao anatin’ny fitantanam-bola dia misy fikajiana atao amin’ireny elanelana ireny mba tsy hisy ny fitongilanam-bidy amin’ny faran’ny taona. Atsofoka ao anatin’io rafi-bidy io ny hetra sy ny haba izay mamatsy vola ny ‘Tahirim-bola ikojakojana ny lalana’ (Fer) na koa ny ‘Tahirim-bola entina miahy ny tontolo iainana’. Ity farany ity dia manaraka ilay hoe fenitra “izay mandoto mandoa”, izay manery ny mpandraharaha ara-tsolitany handoa vola ho fandraisana anjara amin’ny fiahiana ny tontolo iainana. Ny APMF, ny sampan-draharaha any amin’ny seranana, ireo mpandraharaha miasa ao amin’ny sehatry ny lasi-pandaminana izay manangona sy mitatitra ny solitany, ary ireo mpaninjara izay miantoka ny famatsiana ara-tsolika manerana an’i Madagasikara, dia tafiditra ao anatin’ny rafitra misahana ny fanafarana solitany. Mahakasika an-dry zareo ireo koa ny tombony ho an’ny mpandraharaha ara-tsolitany.
Mitaky mafy tsy ankiato ny mpandraharaha ara-tsolitany ny mba handoavan’ny fanjakana ny volan’izy ireo izay mbola tsy voaloa. Inona no mahatonga izany?
Nirotsaka tamin’ny fifampiraharahana momba ny firafitry ny vidin-tsolika ny fanjakana tamin’ny taona 2018. Tsy nivaha tanteraka nefa ny olana fa vonjy maika fotsiny ihany. Notinapaka tamin’izany fa noho ny fisondrotan’ny vidin-tsolika teo amin’ny tsena iraisam-pirenena sy noho ny toe-draharaha ara-politika sy ara-piarahamonina teto amin’ny firenena, ary mba ho fitsinjovana ny mponina, dia tsy hotratrarina ny fifandanjan’ny PRC sy ny PMAP. Vokatr’izany dia nihalalina ilay elanelana efa nisy, ka nihaniavosa ny trosa nananan’ny mpandraharaha ara-tsolitany tamin’ny fanjakana tamin’ny taona 2018.
Nanapa-kevitra ny fanjakana malagasy fa handray an-tanana ny famahana an’io olana io. Nanao ahoana ny fifampiraharahana natao farany?
Nanohy ny fifampiraharahana ny mpandraharaha ara-tsolitany sy ny fanjakana mba hahazoana mametra vidiny “ara-drariny eo amin’ny fiarahamonina” ho an’ny mpaninjara. Ny fifampiraharahana farany dia mahakasika indrindra ny tombony ho an’ny mpandraharaha ara-tsolitany izay mihevitra fa tokony hamafisina ny ezaka atao mba hamerenana ny fifandanjam-bidy araka ny ‘vidiny marina’. Ny hampidinana ny PMAP no tena kendrena amin’izany. Marihina fa tratra ny fahamarinam-bidy tamin’ny volana febroary; noho ny fiovaovan’ny vidin-tsolika isam-barika sy ny fiovaovan’ny sandam-bola vahiny anefa dia zary miavosa indray ny trosa.
Inona no anjara asan’ny Birao malagasy misahana ny solika (OMH) tao anatin’ireny fifampiraharahana ireny?
Mikajy ny PRC isam-bolana, izany no anjara asan’ny OMH. Miankina amin’ny vidin’ny solitany eo amin’ny tsena iraisam-pirenena izy io. Ny vidin’ny barikan-tsolika dia maridrefy eken’ny rehetra anaovana ny kajy, na ny mpandraharaha ara-tsolitany izany na ny fanjakana. Mba hahazoana mampihatra ny rafi-bidy, dia ilaina ny manao fanadihadiana ny sandan’ny vola vahiny. Averinay dinihina ny PRC isam-bolana, aseho ho fanta-bahoaka ny PMAP isaka ny voalohan’ny volana. Ny elanelana misy amin’izy roroa ireo dia mampivohitra ny trosa izay sady mety ho tombony ho an’ny mpandraharaha ara-tsolitany no mety ho an’ny fanjakana ihany koa. Ny tanjona dia ny hisian’ny fifandanjana hatrany amin’ny faran’ny taona.
Nangonin’i Van-Lee Behaja
Previous ArticleNy vehivavy sy ny fifidianana solombavambahoaka, omaly tsy miova toa volan-kakafotra ?Next ArticleTafatafa tamin’i Olga Ramalason